iPhone Mvura Kukuvadza: Yekupedzisira Gwara Pane Maitiro Ekugadzirisa Liquid Damage - Iphone
foni yangu yaisatendeuka divi
zvinotora nguva yakareba sei kuti ipad inobhadharisa
maitiro ekugadzirisa iphone skrini isingashande
zvekuita kana foni yako isisabhadhare
iPhone Mvura Kukuvadza: Yekupedzisira Gwara Pane Maitiro Ekugadzirisa Liquid Damage
Kutora chaiwo matanho ekutanga anogona kunge uri mutsauko pakati pehupenyu nerufu rweiyo iPhone ine mvura yekukuvara. Nehurombo, kune zvakawanda zvisiri izvo online pamhepo nezve chii chaizvo inoshanda kana zvasvika pakununura iPhone yakashata-yakanganisa.
Muchikamu chino, isu tichatsanangura chii chinokonzera kukanganiswa kwemvura ne iPhone ndokuratidza kuti ungazviongorora sei . Tichataura nezvazvo zviratidzo zvakajairika zvekukuvara kwemvura , zvekuita nekukurumidza mushure mekudonhedza iPhone mumvura , uye maitiro ekufunga kuti ungagadzirisa sei mvura-yakakuvara iPhone kana kutenga nyowani .
Liquid Damage Inoitika Kana Iwe Uchigona Zvitarisire Izvo
Chii Chinokanganisa Mvura Mvura Chinotaridzika?
Zviratidzo Zve iPhone Mvura Kukuvadza
IPhone Mvura Inokuvadza Inoitika Sei?
Emergency! Ndakangodonhedza iPhone Yangu Mumvura. Ndoita sei?
Zvaunofanira Kuita Kana Yako IPhone Iwana Mvura-Yakakuvara
Izvo Zvausingafanire Kuita: Mvura Inokuvadza Ngano
Inogona Mvura Kukuvara Kwemvura Kugadziriswa?
Ndinofanira Kugadzirisa Yangu iPhone Kana Kutenga Idzva?
iPhone Mvura Kukuvadza Kugadzirisa Sarudzo
Ndinogona Kutengesa Yakakanganiswa Nemvura iPhone?
Kana iwe uchingodonhedza yako iPhone mumvura uye iwe unoda rubatsiro rwekukurumidza, svetukira pasi kune iyo Emergency chikamu kuti udzidze zvekuita kana iPhone ikafumurwa kune mvura.
Muchidimbu (pachave nemapun), kukuvara kwemvura kunoitika kana mvura kana imwe mvura ikasangana nemagetsi emagetsi e-iPhone. Kunyangwe iPhones nyowani isingatapurike nekukuvara kwemvura kupfuura ekare mamodheru, donhwe diki remvura ndizvo zvese zvinotora kukuvadza iyo iPhone isingagadziriswe.
Iyo inodzivirira mvura chisimbiso pane nyowani iPhones inongogona kupfeka uye kubvaruka seyese foni. Yakagadzirirwa kurwisa mvura, asi kwete kuwanda kwemvura, mafuta, uye magel ayo vazhinji vedu tinoshandisa mazuva ese.
Kukanganiswa kwemvura kunogona kuve pachena kana kusaoneka. Dzimwe nguva inoita kunge tumabhuru tudiki pasi pechidzitiro kana ngura uye kupunduka mukati mechiteshi chayo chekuchaja. Nekudaro, kukuvara kwemvura kwe iPhone kazhinji hakuite kunge chero chinhu - zvirinani kubva kunze.
Maitiro Ekutarisa Kune iPhone Mvura Kukuvadza
Nzira yakanakisa yekutarisa kukuvadzwa kwemvura ne iPhone kutarisa chiratidzo chayo chemvura, kana LCI. PaPhones nyowani, iyo LCI iri mune imwechete slot seSIM kadhi. Pamhando dzekare dzeiyo iPhone (4s uye zvisati zvaitika), iwe unowana maLCI mumusoro wejackphone, chiteshi chekuchaja, kana zvese zviri zviviri.
Apa ndipo paunowana chinongedzo chemvura chinowirirana pane ese iPhone:
iPhone 12 Pro / 12 Pro Max SIM Kadhi Slot
iPhone 12/12 Mini SIM Kadhi Slot
iPhone 11 Pro / 11 Pro Max SIM Kadhi Slot
iPhone 11 SIM Kadhi Slot
iPhone SE 2 SIM Kadhi Slot
iPhone XS / XS Max SIM Kadhi Slot
iPhone XR SIM Kadhi Slot
iPhone X SIM Kadhi Slot
iPhone 8/8 Uyezve SIM Kadhi Slot
iPhone 7/7 Uyezve SIM Kadhi Slot
iPhone 6s / 6s Uyezve SIM Kadhi Slot
iPhone 6/6 Uyezve SIM Kadhi Slot
iPhone 5s / 5c SIM Kadhi Slot
iPhone SE SIM Kadhi Slot
iPhone 5 SIM Kadhi Slot
iPhone 4s Headphone Jack & Yekuchaja Port
Iphone 4 Headphone Jack & Yekuchaja Port
iPhone 3GS Headphone Jack & Yekuchaja Port
iPhone 3G Headphone Jack & Yekuchaja Port
iPhone Musoro wenhare Jack
Maitiro Ekutarisa Iyo LCI Mukati Iyo SIM Kadhi Slot
Kuti utarise LCI pane nyowani iPhone, shandisa paperclip kuburitsa SIM tireyi, iri pazasi pebhatani rerutivi (bhatani remagetsi) kurudyi rwe iPhone yako. Namira kapepa clip mukati megomba diki. Ungangoda kutsikirira pasi neimwe simba kuti ubudise iyo SIM tireyi.
Ongorora: Zvakakosha kuve nechokwadi chekuti kunze kwe iPhone yako yaoma zvachose usati wabvisa SIM tireyi. Kana iwe uchingodonhedza yako iPhone mune mvura uye ichiri yakanyorova, ruka pasi kuchikamu chedu pane zvekuita kutanga kana yako iPhone ikadonhedzwa mumvura.
Tevere, bvisa iyo SIM tireyi uye SIM kadhi, uye bata iPhone yako nechidzitiro chakatarisa pasi. Kubva pakona iyi, shandisa tochi kutarisa muSIM kadhi uye tarisa iyo LCI. Sezvatichakurukura gare gare, zvirinani kusiya yakanyorova iPhone kumeso pasi pane yakati sandara pane kutarisana kumusoro.
Maitiro Ekutarisa Iyo LCI Mukati Meiyo Headphone Jack Kana Yekuchaja Port
Zviri nyore kuona maLCI pane maPhones ekare. Vhenekera mwenje mumusoro wako we iPhone jack kana chiteshi chekuchaja, zvinoenderana nemodeli yaunayo.
Chii Chinotaridzika LCI?
Hukuru uye chimiro che iPhone's LCI inosiyana kubva pamuenzaniso kuenda kumuenzaniso, asi zvinowanzoita zvakanaka kutaura kana iyo LCI 'yakakwikwidzwa', sezvataigara tichitaura kuGenius Bar. Tsvaga tambo diki kana doti mukati memucheto weSIM kadhi slot, pazasi peiyo headphone jack, kana pakati pechiteshi chengarava (chiteshi chechaji) pane maPhones ekare.
Chii Chinoitika Kana LCI Yangu Yakatsvuka?
LCI tsvuku inoratidza kuti yako iPhone yasangana nemvura, uye zvinosuruvarisa, izvo zvinoreva kuti uchafanirwa kubhadhara. Iwe uchazobhadhara zvishoma kana uine AppleCare + kana mutakuri inishuwarenzi pane kana iwe usina kufukidzwa zvachose.
Tichapinda mumitengo uye maitiro ekufunga kuti tigadzirise kana kutsiva iyo yakakuvara mvura iPhone pazasi. Asi usarase tariro. Kungoti nekuti LCI inoverengwa hazvireve kuti iPhone haizodzoke kuhupenyu.
Chii Chandinofanira Kuita Kana Iyo LCI Iri Pink?
Nehurombo, pingi inongova yakareruka mumvuri mutsvuku. Kunyangwe iyo LCI yakajeka yakatsvuka kana yakasviba tsvuku, yako iPhone ine imwe mhando yekukuvara kwemvura uye haizovharidzirwa pasi pewarandi.
Chii Chandinofanira Kuita Kana Iyo LCI Yero?
Kunyangwe zvisingaitike kazhinji, usashamisika kana yako LCI ichiita yero. Nhau dzakanaka ndedzekuti yero haina kutsvuka, zvinoreva kuti yako iPhone haina kukuvadzwa nemvura.
Zvimwe zvinhu (gunk, tsvina, lint, nezvimwewo) zvinogona kunge zvakashandura yako iPhone's LCI. Isu tinokurudzira kuyedza kuchenesa iyo SIM kadhi slot, headphone jack, kana kuchaja chiteshi uchishandisa anti-static brashi kana nyowani nyowani bhurashi.
Kana iyo LCI ikaramba yero, hazvingakuvadze kutora yako iPhone muApple Chitoro! Zvisinei, kana pasina chakaipa ne iPhone yako, hapana zvakawanda zvekugadzirwa kweApple.
Ko IPhone Yangu Ichavharwa Pasi Pewaranti Kana Yayo LCI Ichiri Yakachena?
Kana iyo LCI iri chena kana sirivheri, nyaya iyo yako iPhone iri kusangana nayo inogona kunge isiri yemvura-inoenderana. Kana iwe wakadonhedza yako iPhone mudziva risati ramira kushanda, pamwe ndizvo. Nhau dzakanaka ndedzekuti kana Apple isingakwanise kuratidza kuti yako iPhone yakange yakanganiswa mvura, waranti yako inogona kunge ichiri kushanda.
Zvisinei, nekuda kwekuti LCI haina kutsvuka hazvireve kuti Apple ichavhara iyo iPhone pasi pewarandi. Kana paine chero humbowo hwemvura kana ngura mukati meiyo iPhone, Apple techs inogona kuramba garandi kufukidzwa - kunyangwe kana iyo LCI ichiri chena.
Usawane Pfungwa Dzinonakidza…
Vanhu vazhinji vanoona red LCI uye kutya. Vamwe vanhu vanoedza kushandisa machena kuti vafukidze iyo LCI, uye vamwe vanoibvisa neyaviri yezvimedu. Usazviita! Pane zvikonzero zviviri zvakanaka zvekusaedza kubiridzira:
Pane mukana wakanaka wekuti unokonzeresa kukuvara kune yako iPhone nekukanganisa neLCI.
Apple techs inoona maLCI zuva rese, mazuva ese. Zviri nyore kwazvo kutaurira kana LCI isipo. Kana iyo LCI yakadzvanywa nayo, iyo iPhone inoenda kubva kunze-kwe-garandi kuenda ku voided garandi chinzvimbo. Foni nyowani pamutengo wakazara wekutengesa unodhura mazana emadhora kupfuura chinodzorerwa-kunze-kwechivimbiso kuGenius Bar.
Ndeupi Musiyano uripo pakati pe 'Kunze Kwewaranti' uye 'Yakatemerwa Waranti'?
Kana iwe ukatora iPhone yakakuvara nemvura kuApple Store, iwe ungangodaro uchiudzwa kuti 'iri kunze kwewarandi.' Uchabhadhara zvakati wandei kutsiva yako iPhone kana uine AppleCare +, asi kunyangwe ukasadaro, kutsiva imwe yewarandi iPhone yakachipa kwazvo pane kutenga imwe nyowani.
Kana yako iPhone garandi yave 'voided', izvo zvakashata. Iyo iPhone ine waranti yakavharidzirwa yakarambwa neApple. Ivo havazogadzirise kuGenius Bar. Sarudzo yako chete ndeyekutenga iPhone nyowani nemutengo wakazara wekutengesa.
Kazhinji kutaura, iyo chete nzira yekushaisa yako garandi ye iPhone ndeye kuikanganisa. Kana iwe ukabvisa iyo LCI, inobvisa waranti. Kana iwe ukaitora ikaparadzanisa uye ukarasa sikuruu, inosiya garandi.
Asi kunyangwe ukangozvirova netsaona, uchidonhedza mudziva, kana kumhanya nayo nemotokari yako (ini ndaona zvese izvi), wanga usiri kuita chimwe chinhu chawaisafanirwa kunge uchiita. (Zvirinani, sekureva kwaApple.) Mune zviitiko izvi, iwe unobhadharira 'kunze kwewarandi' kutsiva kana kugadzirisa.
Kukuvara kwemvura kunogona kukonzera matambudziko akasiyana pane iPhone. Kana mvura yapinda mukati, zvinonetsa kuziva kuti ichapararira kupi kana kuti ndeipi mhando yekukuvadza kwainokonzeresa. Pazasi, isu takanyora akati wandei ezviratidzo zvakajairika zvekukuvara kwemvura ne iPhone.
Kana IPhone Yako Iri Kupisa
Mvura-yakanganisa lithiamu-ion mabhatiri anogona kupisa zvakanyanya. Kunyangwe iri zvisingawanzoitika zvisingawanzo (kunyanya zvePhones), mabhatiri eioniyamu ion anogona kubata moto kana akakuvara. Chero Apple Chitoro chine moto wakachengeteka muGenius Kamuri. Handina kumbofanira kuishandisa, asi chenjera chaizvo kana iwe uchinzwa yako iPhone kutanga kupisa kupisa zvakanyanya kupfuura zvakajairwa.
Kana Pasina Ruzha Pane Yako iPhone
Kana mvura ichipinda mu iPhone uye ichikonzera kukuvara, vatauri vayo vanogona kusashanda uye kukanganisa kugona kwayo kuridza ruzha. Izvi zvinogona kukanganisa kugona kwako kuteerera mimhanzi, kunzwa ringer kana mumwe munhu achifona, kana kuita mafoni ako wega uchishandisa speaker speaker.
Sezvo mvura inotanga kubuda kubva mukati me iPhone yako, vatauri vayo vanogona kudzoka kuhupenyu. Kana dzikanzwika dzakamira kana kupomberwa pakutanga, iro ruzha runogona kuvandudzika nekufamba kwenguva - kana zvingasadaro.
Hatigone kuva nechokwadi kuti zvinobatsira, asi maApple watches matsva anoshandisa masipika avo akavakirwa-kudzinga mvura mushure mekunyudzwa. Izvi zvinogona here kushanda kune iPhone? Hatina chokwadi, asi kana mukurukuri ari kuita chero ruzha zvachose, hazvigone kukuvadza kubhidha vhoriyamu uye kuyedza.
Kana Yako iPhone Isiri Kubhadhara
Chimwe chezvinhu zvakajairika uye zvinoshungurudza zvakanyanya iPhone matambudziko zvinoitika kana haibhadhare . Kana mvura ikapinda mune yako iPhone's Mheni chiteshi (iyo yekuchaja chiteshi), inogona kukonzera ngura uye kudzivirira yako iPhone kubva isingakwanise kubhadharisa zvachose.
Edza kuchaja yako iPhone netambo dzakawanda uye akawanda majaja usati wasvika pamhedziso iyi. Nekudaro, kana iyo LCI yakatsvuka uye yako iPhone isiri kubhadharisa, kukuvara kwemvura ingangove iri iyo chikonzero.
Kana iwe ukaedza kushandisa mupunga kuomesa yako iPhone usati waverenga ichi chinyorwa (icho chatisingakurudzire), tora tochi uye utarise mukati mechaji yekuchaja. Pane dzinoverengeka, ndakawana tsanga yemupunga yakanamatira mukati. Usaedze kukamura tambo yeMheni mukati mechiteshi chemheni kana isiri kupinda nyore. Pane kudaro, shandisa bhurosi rezino iwe rausina kumbobvira washandisa zvinyoro nyoro marara.
Pazvaive zvisingaite kubvisa mupunga usina kukuvadza zvemagetsi, foni inogona kunge yakadzoka kuhupenyu yaifanira kutsiviwa. Shamwari yaive nedambudziko iri yakakwereta maturusi ekuveza maturusi kubva kushamwari kubvisa tsanga yemupunga, uye zvakashanda! Hatikurudzire kushandisa chero chinhu chesimbi, zvisinei, kunze kwekupedzisira.
Kana Yako iPhone Isiri Kuziva Iyo SIM Kadhi
Iyo SIM kadhi ndizvo zvinochengetera iyo data pane yako iPhone iyo inokubatsira iwe mutakuri kuti uzvitaure kubva kune mamwe mafoni pane yayo network. Ruzivo senge makiyi ekubvumidza e iPhone yako anochengetwa paSIM kadhi. Aya makiyi anotendera yako iPhone kuwana maminetsi, mameseji, uye data yeako mbozhanhare hurongwa.
IPhone yako inogona kusakwanisa kubatanidza kune yako yenhare yenhare network kana mvura yakanganisa SIM kadhi kana SIM kadhi tireyi. Chimwe chiratidzo chekuti yako SIM kadhi kana SIM tireyi yakanganisirwa nekubatana kwemvura ndeyekuti inoti 'Hapana SIM' mukona yekumusoro-kuruboshwe kona yekuratidzira kwako iPhone.
Kana iwe uchikwanisa kutonga kunze kwekugona kwesoftware kana dambudziko rine chekuita nekutakura zvichikonzera yako iPhone kuti iti Kwete SIM , iwe ungangoda kuve neyayo SIM kadhi kana SIM kadhi tireyi inotsiviwa.
Kana Yako iPhone Isina Sevhisi
Kana kukuvara kwemvura kukanganisa iyo antenna ye iPhone, inogona kunge isina sevhisi kana seyakaipisisa sevhisi. Chero nzira, iPhone haisi iPhone kana iwe usingakwanise kufona. Chinyorwa chedu chinogona kukubatsira kugadzirisa nyaya ne murombo kana kusaita basa pane iPhone.
Kana Iyo Apple Logo Iri Kupenya Pane Yako iPhone
Chimwe chiratidzo chekuti yako iPhone ine yakakosha kukuvara kwemvura ndeye kana yakanamatira kupenya paApple logo. Kana zvikaitika, zvinokwanisika yako iPhone yakanamatira mukutangazve chiuno .
Edza zvakaoma kumisazve yako iPhone kuti uone kana uchigona kugadzirisa dambudziko. Heano maitiro ekuomesa patsva yako iPhone, zvichienderana nekuti ndeipi modhi yaunayo:
Sei Kuomesa Reset An iPhone 6s uye Pakutanga Models
Panguva imwe chete bata uye bata bhatani reKumba uye bhatani remagetsi kusvikira iyo skrini yaenda nhema uye iyo logo yeApple yaonekwa. Unogona kusunungura mabhatani ese kana iwe ukaona iyo Apple logo pane inoratidzwa yako iPhone.
Sei Kuomesa Reset An iPhone 7
Dhinda uye ubatisise vhoriyamu pasi bhatani uye bhatani remagetsi panguva imwe chete kusvikira marogo eApple aonekwa pachiratidziro che iPhone yako. Sunungura mabhatani ese nekukurumidza apo logo yeApple painowoneka.
Maitiro Ekuomesa Reset An iPhone 8 uye Nyowani Models
Kurumidza kudzvanya uye kusunungura vhoriyamu kumusoro bhatani, wobva wakurumidza kudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzvanya wobata padivi bhatani kusvikira iyo Apple logo iratidzike pachiratidziro. Iwe ungatofanira kubata mabhatani pane yako iPhone kwemasekondi 25-30, saka iva nemoyo murefu uye usakurumidza kukanda mapfumo pasi!
Kana Iyo Apple Logo Yakanamatira Pane Iyo Screen
Paunobatidza yako iPhone, inobvunza zvese zvinhu, 'Uripo here?' Uriko here?' Yako iPhone inogona kunamatira paApple logo kana chimwe chete chezvinhu zvacho chisingapindure.
Kana yako iPhone yanga iri kunamira pane iyo Apple logo kwemaminetsi akati wandei, edza kuomesa zvakaoma uchishandisa nzira yatakatsanangura muchiratidzo chekare.
Kana Yako iPhone Kamera Isisiri Kushanda
Iyo iPhone kamera inogona kumira kushanda zvachose kana mvura ikasangana nekamera. Kunyangwe iyo kamera iri kushanda, zvakajairika kwazvo kuti iyo iPhone-yakakuvara iPhone itore mifananidzo yakajeka . Izvo zvinoitika kana lens rikatadziswa nemvura kana zvakasara zvakasara kana zvopera.
Pane mukana wekuti kana iwe ukasiya yako iPhone yega kwechinguva chidiki, iyo kamera inogona kunge ichinyatso shanda zvakare. Kana mifananidzo yako ichiri kujeka mushure memazuva mashoma, ungatofanira kugadzirisa kamera yako.
iphone yakafa haina kukunda
Kana Yako iPhone Isina Simba Kana Iyo Isiri Kuvheneka
Kukuvara kwemvura kunowanzo kuve chikonzero chezvinetso zvakakomba zvehardware izvo kudzivirira iPhone yako kubva kutendeuka uye kushanda zvachose.
Kukanganiswa kwemvura kunogona kukanganisa simba rekushandisa kwe iPhone yako kana yako bhatiri re iPhone bhatiri remukati kune iro logic board. Chiteshi cheMheni pazasi pe iPhone yako zvakare chinotapurwa nekukuvara kwemvura. Pasina kuwana simba, yako iPhone haizobhadhari , uye haizoshanduki.
'Izvi zvakaitika kune yangu iPhone 4. Ndakaikanda mudziva risina kudzika kwemasekondi gumi nemashanu, uye haina kuzobatidza zvakare. Ndaitofanira kushandisa pafiripi foni kweimwe mwaka wezhizha. ”
Kana Pane Mitsara Pane Iyo Screen
Kukuvara kwemvura kunogona zvakare kuita mitsetse yakatwasuka inoonekwa pakuratidzwa kweiyo iPhone yako . Vertical mitsara pane iyo iPhone skrini inowanzo kuratidza kuti skrini yayo yave kusununguka zvishoma uye tambo yeLCD yave kubviswa kubva kune iyo logic board.
Mvura yakanyura muiyo iPhone yako inogona kunge yaregedzera kuratidzira, yakanganisa tambo yeLCD, kana kukuvadza iyo logic board.
Kana Yako iPhone Tochi Yakanamira On
Usashamisika kana tochi yako ye iPhone ichioneka 'yakanamatira' mushure mekuratidzwa kumvura. Nzira yakapusa yekuyedza kugadzirisa dambudziko iri kuita yakaoma reset, inozomanikidza yako iPhone kudzima uye kudzokera mberi. Kazhinji, izvi zvinobudirira kuwana chinhu chemwenje cheiyo iPhone yako 'isina kumira', uchifunga kuti hapana chakakomba kukuvara kwemvura.
Kana zvese zvimwe zviri kushanda, kana kana iwe usiri kuda kupofomadza shamwari dzako, chidimbu chetepa dema remagetsi chingave chinoshanda chenguva pfupi 'kugadzirisa'.
Kana Yako iPhone Kufunga mahedhifoni Akaiswa mukati
Yako iPhone inogona kuverenga zvisiri izvo kuti mahedhifoni akaiswa muhephonefoni jack kana Mheni chiteshi kana mvura yapinda chero eaya akavhurwa. Kana izvi zvikaitika, yako iPhone inogona kunamira mumahedhifoni maitiro . Kuvapo kwemvura kunogona kunge kuchinyengedza yako iPhone kufunga kuti mahedhifoni akaiswa mukati kunyangwe asiri iwo.
Kana Yako iPhone Screen Iri Dema
Rimwe dambudziko rakajairika vanhu vaive naro pavakauya muApple Chitoro yaive yavo iPhone sikirini yaizove nhema , asi zvimwe zvese zvakashanda zvakajairika. Ivo vaitogona kunyangwe kunzwa ruzha rwuchiuya kubva kumatauri!
Kana izvi zvikaitika, zvinowanzoreva kuti tambo yeLCD yakapfupiswa, ichiita kuti skrini ive dema. Unogona kuedza zvakaoma resetting iPhone wako, asi kana LCD waya iri zvakakangwa, hazvizogadzirisi dambudziko.
Iwe zvakare unofanirwa kuve unongwarira nezve kushandisa wired mahedhifoni pazuva rinonaya, kunyanya kana iwe uine yekare iPhone. Mvura inogona kumhanyisa pasi mawaya eefoni yako mumusoro wejackphone kana Mheni chiteshi chei iPhone yako uye inokonzeresa kamwe mukati.
Kukuvadza Kwemvura Kubva kuGym Sweat
Yako iPhone iri panjodzi yekukuvara kwemvura kana ukashandisa mahedhifoni mahedhifoni pajimu. Kana iwe ukashandisa mahedhifoni ma waya, ziya rinogona kumhanyisa pasi waya uye kupinda muhedhifoni jack kana kuchaya chiteshi. Kuti udzivise dambudziko iri zvachose, tora maBlue Bluetooth mahedhifoni. Hapana tambo, hapana dambudziko!
Inogona Mvura Yemunyu Kukuvadza Yako IPhone?
IPhones nyowani inodzivirira mvura, asi haisi yemvura yemunyu. Mvura yemunyu inoisa uye yekuwedzera kutyisidzira iyo yenguva dzose mvura isingaite - ngura.
Mvura yemunyu inogona kukanganisa zvigadzirwa zvemukati zvechigadzirwa chako, izvo zvinowedzera chimwe chipingaidzo pamusoro pekukuvara kwemvura. Izvo zvinonetsa zvakaoma kuchenesa kana kugadzirisa zvakaora zvikamu zveiyo iPhone. Iwe ungatofanira kutora izvo zvakagadziriswa zvinhu kutsiva, kana kutsiva yako yese foni.
Inokurumidza Sei Kukuvara Kwemvura Kunogona Kuitika?
Iwe unogona kushamisika nekuwanda kwemvura inogona kupinda mukati meiyo iPhone, kunyangwe mushure mechinguva chidiki chekunyudza. Vatengi paGenius Bar kazhinji vaisaziva kuti sei iPhone yavo yakangoerekana yamira kushanda - kana vakadaro. Fungidzira kuvhunduka kwavo pandakavaratidza dziva remvura mukati me iPhone yavo mushure mekunge ndavhura iro!
Asi Ini Ndaifunga Yangu iPhone Yakanga Isina Mvura!
Kushambadza nhare sekushomeka kwemvura inzira inoshamisa inoshanda, nekuti inoita kuti vanhu vatende kuti havana mvura. Asi havasi.
Kudzivirira kwemvura kwePhones kunoenzaniswa neIngress Kufambira Mberi, iyo inonzi an IP chiyero . Ichi chiyero chinotaurira vatengi chaizvo kuti mvura uye guruva-risingapindirani foni yavo iri, ine akasiyana maratidziro eimwe yega chiyero.
iPhones pamberi pematanhatu hadzina kuyerwa. Iyo iPhone 7, 8, X, XR, uye SE 2 ari IP67 . Izvi zvinoreva kuti nhare idzi dzinodzivirira guruva uye dzinodzivirira mvura kana dzanyudzwa kusvika 1 mita mumvura kana zvishoma.
Yese iPhone nyowani kubvira iyo iPhone XS (kusasanganisa iyo iPhone SE 2) yakapihwa IP68. Mamwe akagadzirwa kuti asave nemvura kana akanyudzwa kwete zvakadzika kupfuura 2 metres kwemaminitsi anosvika makumi matatu. Vamwe, senge iyo iPhone 12 Pro, vanogona kuramba mvura kana yakanyudzwa kusvika pamamita matanhatu!
Apple inoti zvakare IP68 iPhones inogona kumira pakudururwa kubva kune zvakajairika zvinwiwa zvemumba sedoro, kofi, muto, soda, uye tii.
Kamwe zvakare, Apple haifukidze kukanganiswa kwemvura kwePhones, saka hatikurudzire nemaune kuyedza aya matanho wega!
iPhone 6s & yapfuura Not rated N / A. N / A.
iPhone 7 IP67 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita 1 pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone 8 IP67 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita 1 pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone X IP67 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita 1 pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone XR IP67 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita 1 pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone SE 2 IP67 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita 1 pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone XS IP68 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita maviri pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone XS Max IP68 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita maviri pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone 11 IP68 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita maviri pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone 11 Pro IP68 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita mana pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone 11 Pro Max IP68 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita mana pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone 12 IP68 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita matanhatu pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone 12 Mini IP68 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita matanhatu pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone 12 Pro IP68 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita matanhatu pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
iPhone 12 Pro Max IP68 Kudzivirirwa kwakakwana Kusvika pamamita matanhatu pakadzika kwemaminitsi makumi matatu
Kana yako iPhone ikasangana nemvura kana imwe mvura, kuita nekukurumidza uye nenzira kwayo kunogona kuve musiyano uripakati pefoni yakaputsika neiyo inoshanda. Pamusoro pazvose, usavhunduke.
Hazvina basa kuti unoita nekukurumidza sei, zvakadaro, kana iwe usingazive zvekuita. Kumwe kweanonyanya kuzivikanwa kukuvara kwemvura 'gadziriso' chaizvo zvinokuvadza kupfuura kunaka. Kana iwe uchifunga kuti yako iPhone iri mvura yakakuvara, isa pasi pasi pane yakati sandara pamusoro uye uteedzere matanho ari pazasi.
Tisati tatanga, tinoda kukuyambira pamusoro pechinhu chimwe chete: Usatenderedza kana kuzunza yako iPhone, nekuti izvo zvinogona kukonzera mvura iri mukati me iPhone yako kudira pane zvimwe zvinhu uye kukonzera kukuvara kwakawanda.
1.Bvisa Liquid Kubva Kunze KweI iPhone Yako
Kana yako iPhone iri mune imwe kesi, bvisa iyo wakabata yako iPhone yakatwasuka, nechidzitiro chakanongedzera pasi. Fungidzira kuti kune dziva remvura mukati (nekuti panogona kunge paine zvakanaka) uye iwe haudi kuti dziva rifambe munzira ipi neipi.
Tevere, shandisa microfiber kana imwe yakapfava, inopinza jira kupukuta chero mvura kunze kweiyo iPhone yako. Usashandise tishu, donje swab, kana chero chimwe chinhu chinogona kupatsanuka kana kusiya guruva kana zvakasara mukati me iPhone yako.
2. Bvisa SIM Kadhi
Chimwe chezvinhu zvekutanga zvauchazoda kuita kana yako iPhone yafumurwa kumvura kubvisa yayo SIM kadhi. Izvi zvinoshandira iyo mbiri chinangwa chekubatsira kusevha iyo SIM kadhi pachayo uye kubvumira mweya kupinda yako iPhone.
Kusiyana nemazuva ekare, iyo SIM kadhi yeImesi haina ako ekufonera kana ruzivo rwemunhu. Icho chete chinangwa ndechekubatanidza yako iPhone kune cellular network. Neraki, SIM kadhi dzinowanzopona panoteuka, kunze kwekunge dzave kuratidzwa kumvura kwenguva yakareba.
foni yangu haimire kutangazve
Kana iwe uine fan, unogona kuedza kufuridza mweya wakatonhora wakananga muchiteshi chemheni kana SIM kadhi slot yekuwedzera mweya. Siya yakawanda nzvimbo pakati pe fan uye yako iPhone. Mhepo ine runyararo inopfuura zvakakwana kuti ikwanise kuita shanduko. Usashandise yekuomesa yekurova kana chero imwe fani inovhuvhuta mweya unopisa.
3. Isa iPhone Yako Pane Imwe Flat Pamusoro Panzvimbo Yakaoma
Tevere, isa yako iPhone kumeso pasi pane yakati sandara pamusoro, kunge pakaunda kaunda kana tafura. Sarudza nzvimbo ine hunyoro hwakaderera. Usaise yako iPhone mumudziyo kana muhombodo.
Tilting yako iPhone kana kuiisa muhombodo nemupunga zvinonyatso kukonzera mvura kudurukira kune zvimwe zvemukati zvikamu. Iyo inogona kuve mutsauko pakati pehupenyu nerufu kune yako iPhone.
4. Set Desiccants Pamusoro Pe iPhone Yako
Kana iwe uine mukana kune vekutengesa desiccants, zvigadzike pamusoro uye nekukomberedza yako iPhone. Chero zvaungaita, usashandise mupunga! (Zvizhinji nezve izvo gare gare.) Haisi inoshanda desiccant.
Chii chinonzi Desiccants?
Desiccants zvinhu zvinogadzira mamiriro ekuoma mune zvimwe zvinhu. Vanogona kuwanikwa mune zvidiki zvidiki mapaketi anotumirwa nezvinhu zvakaita sevhitamini, zvemagetsi, uye mbatya. Inotevera nguva iwe paunowana pasuru, uvaponese! Vachauya vanobatsira kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge
5. Mirira Mvura Idzoke
Paunenge iwe watora matanho ekutanga kuti utore iPhone yako, kuiisa pasi uye kufamba uchienda kazhinji ndicho chinhu chakanakisa chaungaite. Kana paine mvura mukati me iPhone yako, kusagadzikana kwemvura pamusoro kuchabatsira kudzivirira kuti isapararire. Kufambisa yako iPhone kunogona chete kukonzera mamwe matambudziko.
Sezvatichazotaura gare gare, zvidzidzo zvesainzi zvakaratidza kuti kufumura mvura-yakakuvara yemagetsi kune yakavhurika mhepo inogona kushanda zvakanyanya pane kuinamatira mupunga. Nekutora iyo SIM kadhi, isu tabvumidza yakawanda mweya kuti upinde mukati me iPhone yako, uye izvo zvinobatsira iyo nzira yemvura.
Tinokurudzira kumirira maawa makumi maviri nemaviri usati waedza kudzorera yako iPhone kumashure. Apple inoti mirira kwemaawa mashanu. Iyo yakawanda nguva, zvirinani. Tinoda kupa chero mvura mukati medu iPhone nguva yakakwana yekutanga kubuda.
6. Edza Kutendeudza Yako iPhone Kudzoka On
Ipo yako iPhone ichiri pane yakati sandara pamusoro, plug iyo musimba uye mirira kuti itende. Unogona kuedza kushandisa bhatani remagetsi, asi ungangodaro usingade. Kana iwe wakamirira maawa makumi maviri nemana ataura, mikana ingangove yapera bhatiri. Kana izvozvo zvikaitika, yako iPhone inofanirwa kuvheneka otomatiki mushure memaminetsi mashoma ekuchaja.
7. Back Up Your iPhone, Kana Unogona
Kana yako iPhone ikatendeuka, dzosera ipapo ipapo uchishandisa iCloud kana iTunes . Kukuvara kwemvura dzimwe nguva kunogona kupararira, uye iwe unogona kungova newindo diki remukana wekuchengetedza mapikicha ako uye imwe data yemunhu.
8. Matanho Ekuwedzera, Zvichienderana Nemamiriro Ezvinhu
Zvichienderana nekwaunodonhedza iPhone yako, panogona kunge paine dzimwe nyaya dzinoda kutariswa. Ngatitorei nyaya-ne-kesi tarisa pazviitiko zvitatu zvakajairika:
Ndadonhedza iPhone Yangu MuToilet!
Kudonhedza yako iPhone muchimbuzi kunowedzera chimwe chinhu kumamiriro acho ezvinhu: mabhakitiriya. Kunze kwekutevera matanho ari pamusoro, tinokurudzira kupfeka magiravhusi eratex iwe uchibata yako iPhone. Rangarira kuisa utachiona nemaoko ako mumashure!
Pandaive kuApple, ndinorangarira imwe nhambo apo mumwe munhu akanditambidza foni, achinyemwerera, ndokuti, 'Ndakairasa muchimbuzi!'
Ndakapindura, 'Hauna kufunga kundiudza izvi usati wanditambidza foni yako?' (Ichi chaisave chinhu chakakodzera kutaura mumamiriro ezvinhu evatengi.)
'Ndaripukuta!' akadaro zvisina tsarukano.
Kana iwe ukaunza yako iPhone muApple Chitoro kana yemuno yekugadzirisa shopu mushure mekudonhedza muchimbuzi, ndapota ita chokwadi chekuudza nyanzvi kuti i 'chimbuzi foni' usati waipa kwavari. Ndingafunga kuisa muhombodo yechipfuva chekufambisa.
Pane zvakawanda zvekugadzirisa kumba nekukurumidza uye 'zvishamiso zvekurapa' vamwe vangakurudzira. Nekudaro, isu tinokurudzira zvakasimba kusaterera mungano nezvekuporesa kwezvishamiso.
Nguva yakawanda, iyo 'mishonga' inogona kukuvadza kupfuura kunaka kune yako iPhone. Mune zvimwe zviitiko, zvigadziriso zvepamba zvinogona kukonzera kukuvara kusingachinjiki kune yako iPhone.
Nhema 1: Isa Yako iPhone Mune Bhegi Remupunga
Ngano yekutanga yatinoda kuita ndeye 'gadziriso' yakajairika kune iPhones dzakakuvara nemvura: 'Kana yako iPhone ikanyorova, namira muhomwe yemupunga.' Pane zvakawanda zvekufungidzira pamusoro penyaya iyi, saka takatsvaga hwaro hwesainzi hwekutaura kuti mupunga haushande.
Takawana kudzidza kumwe kwesainzi inonzi 'Kubudirira kweanotengesa desiccants uye mupunga usina kubikwa mukubvisa hunyoro kubva kune zvekunzwa zvinobatsira kujekesa nyaya iyi. Zviripachena, rubatsiro rwekunzwa rwakasiyana pane iyo iPhone, asi mubvunzo waunotarisa wakafanana: Ndeipi nzira yakanakisa yekubvisa mvura kubva kumagetsi madiki, akakuvara nemvura?
Chidzidzo ichi chakaona kuti hapana chakanakira kuisa zvekubatsira kunzwa mupunga chena kana shava pane kungozvigadzika patafura isina chinhu wosiya mweya waoma. Nekudaro, pane zvakasarudzika zvakashata zvekushandisa mupunga kuyedza kuomesa yako iPhone.
Mupunga unogona dzimwe nguva kuparadza iyo iPhone ingadai isina kununurwa. Chidimbu chemupunga chinogona kukosheswa mumusoro-soro jack kana chiteshi chekuchaja.
Chiteshi cheMheni chingangoita saizi tsanga imwe yemupunga. Kana imwe ikangomira mukati, zvinogona kunge zvakaoma, uye dzimwe nguva zvisingaiti kubvisa.
Uye saka tinoda kujekeswa: Usaise yako iPhone muhomwe yemupunga. Mucheka muchena mupunga brown mupunga hazvina basa. Uyezve, paunoisa yako iPhone muhomwe yemupunga, watambisa mupunga wakanaka!
yangu iphone charger haisi kushanda
Nhema 2: Isa Yako iPhone Mune Iyo Firiji
Ngano yechipiri yatinoda kutaura ndeyekuti kana iri zano rakanaka kuisa yako iPhone yakakuvara nemvura mufiriji. Isu tinotenda vanhu vanoedza kuisa yavo iPhone mufiriji kudzivirira mvura kuti isapararire munzvimbo yese. Nekudaro, iwe paunongotora yako iPhone kubuda mufiriji, mvura inongonyungudika uye inopararira muiri yako iPhone zvakadaro.
Kana uchiita nekukuvara kwemvura ye iPhone, isu tinoda kuburitsa mvura nekukurumidza sezvazvinogona. Kuisa yako iPhone mufiriji kunoita zvinopesana neizvi. Inoita chando mvura mukati me iPhone yako, kuibata uye kuidzivirira kuti isapunyuke.
Mvura ndiyo imwe chete yezvinwiwa zvinowedzera sekusvika kwechando. Izvi zvinoreva kuti kutonhodza iPhone yako kuchawedzera huwandu hwemvura yakavharirwa mukati, uye pamwe nekuiunza mukusangana nezvinhu zvisati zvakuvadzwa.
Pane chimwezve chikonzero nei iwe uchifanira kunge usingaise yako iPhone mufiriji. iPhones dzine tembiricha yekushanda iri pakati pe32-95 ° F. Tembiricha yavo isinga shande inongoenda pasi -4 ° F, saka zvinogona kunge zvisina kuchengeteka kuisa munzvimbo inotonhora kupfuura iyoyo.
Firiji yakajairika inoshanda pa0 ° F, asi dzimwe nguva inogona kuitirwa kutonhora. Kana iwe ukaisa yako iPhone mufiriji pa -5 ° F kana kutonhora, iwe unomhanya iyo njodzi yekukonzeresa kukuvara kune yako iPhone.
Nhema 3: Furidzira Kuomesa Yako iPhone, Kana Kuinamira MuOvheni! Inoomesa Bvudzi Rako, Haifanire Kuomesa Yako iPhone?
Usaedze kuvhuvhuta mvura kubva mu iPhone yako. Kushandisa yekuomesa yakaoma kunogona kuita kuti dambudziko riwedzere!
Iyo yekuomesa yekuomesa inosundira mvura zvakadzika mu iPhone yako. Izvi zvaizofumura yakawanda yako iPhone kumvura, zvinova zvinopesana nezvatinoda kuti zviitike.
Kana iwe uri kufunga kuisa yako iPhone muchoto kuti uyedze kuita kuti mvura iome nekupisa, isu hatingakurudzire izvozvo futi. Zvinoenderana nezvakataurwa naApple, iyo iPhone XS ine tembiricha yekushanda inosvika 95 ° F (35 ° C) uye isina-inoshanda tembiricha inosvika 113 ° F (45 ° C).
Kana iwe uine ovhoni inopisa kusvika 110 ° F, wozoedza! Ndakatarisa, uye zvinosuwisa, iyo yakadzika tembiricha pane yangu iri 170 ° F.
Kunyangwe mamwe emagetsi emvura asinganetsi mukati me iPhone yako anogona kudzora tembiricha yakakwira kwazvo, iyo skrini, bhatiri, chisimbiso chisina mvura, uye zvimwe zvinhu hazvisi semushonga unopisa.
Nhema 4: Shandisa Isopropyl Doro Kuomesa Yako iPhone
Isopropyl doro idiki-inowanzo shandiswa mhinduro kumba kugadzirisa iPhone mvura kukuvara. Pane zvinhu zvitatu zvakakosha kana uchiisa yako iPhone mune isopropyl doro.
Kutanga, doro rinogona kupfeka pasi oleophobic kupfeka pane yako iPhone's kuratidza. Iyo oleophobic yekupfeka ndiyo inoita kuti yako iratidzwe zvigunwe-zvinopesana. Iwe unomhanyisa njodzi yekunyadzisa hunhu hwekuratidzira nekuisa yako iPhone mudoro.
Chechipiri, isopropyl doro inogara ichisanganiswa neimwe huwandu hweimwe mvura. Kazhinji, imvura. Nekufumura yako iPhone kune isopropyl doro, uri kuifumurawo kune yakatowanda mvura.
Chechitatu, isopropyl doro is the polar solvent. Izvi zvinoreva kuti yakanyanyisa kuitisa. Imwe yematambudziko makuru nekukuvara kwemvura ndeyekuti inogadzira magetsi magetsi munzvimbo dzisingatarisirwe.
Iwe unofanirwa kubvisa zvese kubva kubhatiri re iPhone yako usati watombotanga kufunga nezvekushandisa isopropyl alcohol. Kuparadzanisa iPhone ibasa rakaoma, kunoda hunyanzvi hwekushandisa, uye inogona kushaisa zvachose warandi yako.
Nezvikonzero izvi, tinokurudzira zvine simba kupokana nekuedza kugadzirisa yako yakakuvara-mvura iPhone uchishandisa isopropyl doro.
Kana iwe wakatora matanho ari pamusoro apa uye iwe uchine nyaya, inguva yekutora danho nezve maitiro ekuenderera mberi. Pane zvakawanda zvingasarudzwa, kubva pakutenga foni nyowani kugadzirisa chimwe chete chinhu. Chinangwa chedu ndechekukupa iwe neruzivo iwe rwaunoda kuti uite sarudzo yakanakira iwe uye yako yakakuvara nemvura iPhone.
Dzimwe nguva zvinogona, uye dzimwe nguva hazvigone. Kukuvara kwemvura hakufungidzike. Iwe uchawedzera mikana yako yekununura yako iPhone nekutevera edu matanho atinokurudzira pamusoro, asi hapana zvivimbiso.
Rangarira kuti mhedzisiro yekukuvara kwemvura haisi kugara ichikurumidza. Sezvo mvura inofamba ichipinda mukati me iPhone, zvinhu zvanga zvichishanda zvinogona kumira pakarepo. Zvinogona kuva mazuva kana vhiki kusvikira matambudziko atanga kuitika.
Kutanga Kufunga: Iwe Une AppleCare + Kana Inishuwarenzi?
Kana iwe uine AppleCare + kana inishuwarenzi kuburikidza neyako isina waya inotakura, tanga ipapo. AT & T, Sprint, Verizon, T-Mobile, uye nevamwe vatakuri vese vanopa imwe nzira yeinishuwarenzi. Iwe uchafanirwa kubhadhara inobvisirwa, asi kazhinji inodhura yakaderera zvakanyanya kupfuura mutengo weiyo nyowani iPhone.
Nekudaro, kana iwe uine yekare foni uye uri kutsvaga chikonzero chekusimudzira, saka ino inogona kunge iri nguva yakakwana. Iyo inobvisirwa yevamwe vatakuri inyaya yakawanda yakawanda kunze-kwehomwe pane kutsigira iyo iPhone nyowani ine muripo wemwedzi.
Nezve AppleCare +
AppleCare + inovhara kusvika kune maviri 'zviitiko' zvemvura kana zvimwe zvakakanganiswa netsaona, iine $ 99 yemari yebasa. Kana iwe usina AppleCare +, kunze-kwe-garandi kugadzirisa kwekukuvara kwemvura kunogona kudhura zvakanyanya.
Apple haigadzirise zvikamu zvega pama iPhones akakuvara nemvura - anotsiva foni yese. Kunyangwe izvi zvingaite senge kubvarurwa, chikonzero chavo chekuita kudaro chine musoro.
Kunyangwe hazvo chimwe chikamu chingagadziriswe dzimwe nguva, kukuvara kwemvura kunonetsa uye kunogona kukonzera matambudziko mumugwagwa sezvo mvura ichipararira muiyo iPhone yako.
Kubva pakuona kwaApple, hazvingagone kupa garandi pane iyo iPhone inogona kutyora pasina yambiro. Iwe uchiri kubhadhara zvishoma kutsiva iyo iPhone kuburikidza neAppleCare + kana iwe uchibhadhara iyo inobviswa.
Izvo zvakati, uye kunyanya kupihwa kunze-kwe-garandi mutengo wekugadzirisa kuburikidza neApple, wechitatu-bato masevhisi kana zvitoro zvekugadzirisa zvinogadzirisa zvikamu zvega zvingave zviri bheji rako rakanakisa. Ingoziva kuti kutsiva chero chinhu pane yako iPhone nechinhu chisiri cheApple kuchashaisa zvachose warandi yako.
Apple Mvura Kukuvadza Kugadzirisa Mitengo
iPhone 8 Uyezve $ 399.00 $ 99.00
iPhone 7 Uyezve $ 349.00 $ 99.00
iPhone 6s Uyezve $ 329.00 $ 99.00
iPhone 6 Uyezve $ 329.00 $ 99.00
iPhone 5, 5s, uye 5c $ 269.00 $ 99.00
iPhone 3G uye 3GS $ 149.00 $ 99.00
Nezve Inotakura Inishuwarenzi
AT & T, Sprint, T-Mobile, uye Verizon vanoshandisa kambani inonzi Asurion kupa inishuwarenzi yefoni kune vatengi. Asurion Nhare Inishuwarenzi Zvirongwa zvinofukidza kukuvara kwemvura. Mushure mekunyora chikumbiro, Asurion anowanzo kutsiva chishandiso chakakanganiswa mukati memaawa makumi maviri nemana, chero bedzi chakafukidzwa pasi pewarandi.
Heano mamwe marubatsiro anobatsira kana iwe uine mutakuri inishuwarenzi uye ungade kuisa chikumbiro chekukuvara kwemvura:
Faira A Chikumbiro
AT & T. Faira An Inishuwarenzi Mhosva Foni Yekutsiva Mutengo
T-Nhare Faira An Inishuwarenzi Mhosva - Kudzivirirwa Kwefoni Kutsiva Mutengo
- Yekutanga Midziyo Kudzivirirwa Runhare Kutsiva Mutengo
- Premium Handset Dziviriro (Yakabhadharwa) Runhare Yekutsiva Mutengo
Verizon Faira A Chikumbiro Foni Yekutsiva Mutengo
Kana iwe uchienzanisa mutengo wefoni nyowani nemutengo wekutsiva chikamu chimwe chete, dzimwe nguva kutsiva chikamu chimwe chete ndiyo nzira yekuenda. Asi dzimwe nguva hazvisi.
Kana iyo yose iPhone yako iri muchimiro chakanaka uye foni yako iri nyowani, ipapo kugadzirisa kunogona kuve kwako kwakanyanya kubheja, kunyanya kana chikamu chakakuvadzwa nemvura chiri mutauri kana chimwe chikamu chisingadhuri.
Kutsiva iyo iPhone yese kunogona kunge kuri iko kufamba chaiko kana zvinopfuura chimwe chinhu chakatyoka kana zvikasatendeuka zvachose. Ichave shoma yemusoro uye inogona kunge yakachipa pane kutsiva akawanda akaputsika zvikamu.
Pese paunotenga foni nyowani, une mukana mukuru wekuchengetedza mari. Kusvikira nguva pfupi yadarika, vanhu vazhinji vakagara nemutakuri wazvino nekutadza, nekuti kuenzanisa mitengo pamitakuri kwainetesa uye kunotora nguva.
Isu takagadzira UpPhone kugadzirisa dambudziko iro. Webhusaiti yedu ine injini yekutsvaga inoita kuti zvive nyore enzanisa nhare dzese uye hurongwa hwese hwefoni muUnited States, padivi-ne-padivi.
Kunyangwe iwe uchifara nemutakuri wako wazvino, zvingave zvakakodzera kutora nekukurumidza tarisa kune matsva zvirongwa zvavanopa. Mitengo yadonha sezvo kukwikwidza kwawedzera, uye vatakuri havawanzorega vatengi vavo varipo vazive nguva yavanogona kuchengetedza mari.
Pa-Zvinoda Kugadziridza Services
On-kudiwa, 'isu tinouya kwauri' yechitatu-bato kugadzira makambani isarudzo huru kana iwe ukangodonhedza yako iPhone mumvura. Mazhinji emasevhisi ekugadzirisa aya anogona kutumira mumwe munhu kwauri isingasviki awa.
Pulse ndeimwe yatinoda pane-yekuda yekugadzirisa masevhisi. Vanogona kutumira nyanzvi yakasimbiswa yakananga kusuo rako mune mashoma semaminetsi makumi matanhatu, uye vopa waranti yeupenyu pane ese masevhisi.
Yako yemuno 'amai uye pop' iPhone yekugadzirisa shopu ndeimwe nzira yekukurumidza kuwana rubatsiro kana iwe ukadonhedza yako iPhone mumvura. Mhedzisiro ndeyekuti haizove yakabatikana seApple Chitoro, uye kazhinji haufanire kuita musangano.
Nekudaro, isu tinokurudzira kuvapa runhare usati waenda kuchitoro. Haasi ese mashopu ekugadzirisa anogadzirisa maPhones akakuvara nemvura, uye dzimwe nguva zvitoro zvemuno hazvina zvikamu zvemunhu mudura. Kana nzvimbo yako yekugadzirisa inokurudzira kugadzirisa zvikamu zvakawanda zve iPhone yako, ungangoda kufunga nezve kutenga foni nyowani.
Iwe ungangoda kudzivirira mail-mune masevhisi kana iwe uchifunga kuti yako iPhone ine kukuvara kwemvura. Kutumira yako iPhone kunogona kuizungunusa uye kuwedzera njodzi yekupararira kwemvura muiyo iPhone yako.
Nekudaro, kana yako iPhone yaoma uye isiri kudzoka kuhupenyu, tsamba-mukugadzirisa masevhisi anowanzove nenguva yekushandurwa kwemazuva mashoma uye anogona kudhura zvishoma pane dzimwe sarudzo.
Ini Ndinogona Gadzirisa Iyo Yemvura-Yakakuvara iPhone Ini Pachezvangu?
Hatikurudzire kuyedza kugadzirisa yako yakakuvara-mvura iPhone wega, kunyanya kana usati wambozviita. Zvinogona kunetsa kuziva kuti ndezvipi zvikamu zve iPhone yako zvinoda kuchinjwa. Zvinogona kuve zvakatonyanya kuoma kuwana yepamusoro-soro yekutsiva zvikamu.
Kubvarura yako iPhone kunoda yakasarudzika seti yezvishandiso. Kana iwe uri rudzi rwekutsamwa, unogona kutenga iPhone yekugadzirisa kit paAmazon isingasviki $ 10.
Ndinogona Kutengesa Iyo Yakashatiswa Yemvura iPhone?
Mamwe makambani achatenga maPhones akakanganiswa nemvura kubva kwauri kuitira kuti agadzirezve zvakachengeteka kana kununura zvikamu izvo zvichiri kushanda. Iwe haugone kuwana zvakawanda, asi zviri nani kupfuura chero chinhu, uye iyo mari inogona kuiswa mukutenga foni nyowani.
Tarisa uone chinyorwa chedu chekuenzanisa kwenzvimbo dzaunogona tengesa yako iPhone .
Kuti Upfure Pamusoro Pako Kugadzirisa Sarudzo
Sezvatakambotaura, dzimwe nguva sarudzo yakanakisa ndeye simudzira kune iPhone nyowani , kunyanya kana foni yako yazvino yaizoda mari yakawanda kugadzirisa. Yese iPhone kubvira iyo iPhone 7, uye akawanda matsva maApple, seGoogle Pixel 3 uye Samsung Galaxy S9, haidziviri nemvura.
Sarudzo, zvisinei, iri zvachose kwauri. Tanga nekutsvaga yako inishuwarenzi kufukidza, uye wozoenda pamitengo kunze kwekugadzirisa. Tinoziva iwe uchaita sarudzo chaiyo.